Bishes Khabar | मासुको खपत घटाउँदा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सहयोग पुग्छः अध्ययन
मासुको खपत घटाउँदा जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न सहयोग पुग्छः अध्ययन
सोमबार १९, बैशाख २०७९ १०:३८
एजेन्सी (न्युयोर्क) । तपाईले दैनिक कति मासु खानु हुन्छ ? त्यसो त विज्ञहरू शाकाहारी भोजनलाई जोड दिँदै आएका छन् । माछा मासुभन्दा फलफूल स्वास्थ्यका लागि हितकर हुने उनीहरूको भनाइ छ । तर, वैज्ञानिकहरूले मासु कम खाँदा स्वास्थ्यमा फाइदाकाे अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनसँग लड्न सहयोग हुने बताएका छन् ।
के कोभिडका नयाँ भेरियन्टलाई पनि कोरोनाको खोपले काम गर्छ ?
भारतमा १२ वर्षमूनिका बालबालिकाका लागि दुई कोभिड खोपलाई स्वीकृति
चैत २५ देखि बालबालिकालाई टाइफाइडविरुद्धको खोप
कोरोना भाइरसको पीसीआर शुल्क घट्यो